တရုတ်နိုင်ငံက ပြောင်းရွှေ့သွားလာနေသော ဆင်အုပ် အနောက်တောင်ပိုင်းသို့ ဦးတည်သွားလာနေ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့ Jinning ခရိုင်၌ အာရှတောရိုင်းဆင်အုပ်အား ဇွန် ၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကူမင်း ၊ ဇွန် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တစ်ကမ္ဘာလုံးက အာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သည် ဆင်အုပ်ကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းမြို့တော် ကူမင်းမြို့အပြင်ဘက်၌ ကောင်းစွာအနားယူပြီးနောက် အနောက်တောင်ဘက် ၃.၇ ကီလိုမီတာထိ ဦးတည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အကောင်ရေ ၁၄ ကောင်ပါဝင်သော အာရှတောရိုင်း ဆင်အုပ်သည် ဇွန် ၈ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် ယွိရှီးမြို့ စီကျယ်မြို့နယ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းဆင်အုပ်သည် ဇွန် ၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်ထိ ယွိရှီးမြို့၌ အနားယူနေသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း ဆင်အုပ်ပြောင်းရွှေ့မှုအား စောင့်ကြည့်နေသော ရုံးချုပ်များမှ တာဝန်ခံများက ပြောကြားသည်။
လွန်ခဲ့သော လေးရက်က ဆင်အုပ်မှ ကွဲထွက်လာသော ဆင်ထီးတစ်ကောင်သည် ယခုအခါ ကူမင်းမြို့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသော ကောင်တီအဆင့်ရှိ Anning မြို့ တောအုပ်အတွင်း ၁၂ ကီလိုမီတာအကွာအဝေး၌ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
တာဝန်ရှိသူများက ဆင်များ၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစေရန် နှင့် ဒေသခံများအား ရွှေ့ပြောင်းမှုများအတွက်ကူညီ ပေးရန် အရေးပေါ် ဝန်ထမ်းများ ၊ ယာဉ်များ နှင့် ဒရုန်းများအား စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဇွန် ၉ ရက်တွင် ဆင်များအား အစားအစာ ၂ ဒသမ ၁ တန် ကျွေးမွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆင်အုပ်သည် ဇွန် ၃ ရက်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် ကူမင်းမြို့သို့ မရောက်ရှိမီ ရှစ်ဆောင်ပဏ္ဏား တိုင်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ခွဲရှိ ၎င်းတို့၏ နေရပ်သစ်တောမှ ခန့်မှန်းခြေ ကီလိုမီတာ ၅၀၀အထိ လှည့်လည် သွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်လကျော်က တာဝန်ရှိသူများသည် ဆင်အုပ် ဖြတ်သန်းသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် ဘေးလွတ်ရာလမ်းကြောင်းလွှဲပေးခြင်း နှင့် လူနေထူထပ်သောဒေသများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ရှောင်လွှဲရန် အစားအစားများဖြင့် မြှား၍ အာရုံလွှဲခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အစောင့်ရှောက်ဖြင့် လည်း လိုက်ပါစေခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
အာရှဆင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံအဆင့် ထိန်းသိမ်းမှု အဆင့်-A အောက်တွင် သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းတို့အား ယူနန်ပြည်နယ်၌ အများဆုံး တွေ့ရှိရသည်။ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု တိုးမြှင့်ခဲ့သည့်အတွက် ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း တောရိုင်းဆင်အကောင်ရေသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၁၉၃ ကောင်မှ ၃၀၀ ခန့်အထိ တိုးလာခဲ့သည်။ (Xinhua)
China’s migrating elephant herd heads southwest
1.Aerial photo taken on June 8, 2021 shows the wild Asian elephant herd in Jinning District of Kunming, southwest China’s Yunnan Province. The wandering wild Asian elephant herd that has caught global attention has headed 3.7 km further southwest after takingagood rest in the outskirts of the southwestern Chinese city of Kunming. (Xinhua)